ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဦးတည်ချက်များက စောက်တလွဲ
Pa Yit စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာကြွေးကြော်ခဲ့တာ. .နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်-- အပြင်ကနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စောက်တလွဲဖြစ်သွားရတယ် စီးပွားရေးဦးတည်ချက်-- ပိုဆိုးသေး၊အကုန်မွဲခါလီကျပြီးခရိုနီ၊တရုတ်၊ကုလားကအပြောင်ရိတ်တာ၊ ဆပ်ပြာမလိမ်းပဲနဲ့ကို....ဒါးတုံးနဲ့ရိတ်ခံလိုက်ရတာခံရတာလေ... သေတာထက်ဆိုးသေး.၊ လူမှုရေးဦးတည်ချက်-- ဖါပေါဖုတ်ထူ၊နိုင်ငံတကာလှည့်ကျွန်ခံ၊ အဂတိလိုက်စားမှုထိပ်ဆုံးအဆင့်၊ ဘွဲ့ရပညာမတတ်အပေါဆုံး .နောက်တစ်ခုက.. "ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့" တဲ့...၊ အာဆီယံမှာကို....လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားကို..မနဲလိုက်ရမဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်...............၊ အဲဒီတော့စစ်အစိုးရလက်ထက်ကသူတို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ "လေ" တွေက HEAVY တွေ......အကြီးကြီးတွေ....... .ပြီးရင်...လုံးဝကိုဆန့်ကျင်ဘက်...တလွဲတွေ...... အခုလဲ.. "စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီ"တဲ့....လာပြန်ပြီ.......၊ "ဒီမိုကရေစီ" ဆိုပါမှ...စည်းကမ်းရှိပြီးသား..၊ "အ၀တ်အစားဝတ်ပါတယ်"ဆိုမှတော့.."လုံခြည်" ပါပြီးသား၊ ဒါကို...ထပ်ပြီး..ကွန့်မြူးကြတယ်...၊ ၀ါသနာကို..ပါကြတာ.၊ ကွန့်ုမြူးတဲ့အလုပ်ကို..အရသာကိုတွေ့နေကြတာလေ.. စိတ်လေတယ်.... အဲလိုအော်နေပြီးတော့.... တကယ်ကို..ပြည်သူတွေအတွက် key ကျတဲ့.... အဆိုတွေကိုကန့်ကွက်တယ်...၊ ကိုယ်ကျိုးနဲ့ယှဉ်လာပြီဆိုတော့... ပါတီရဲ့....လွှတ်တော်ရဲ့... impression ရယူဖို့အတွက်တောင်.. မေ့သွားကြတယ်.. သူတို့အကျိုးကို ဦးစားပေးလွန်းကြောင်းဖေါ်ပြလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်၊ ...ငါတို့လုပ်တာကိုလူတွေအသိခံလို့မဖြစ်ဘူး၊သိရင်သွားပြီ..ဆိုတဲ့ စိတ်တွေလွမ်းမိုးသွားတယ်..၊ အဲဒီလိုshock ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ... တစ်ဘက်မှာလဲ.....အစကတည်းက"ယဲ့ယဲ့လေး" ပဲရှိနေတဲ့ "ပြည်သူ့အတွက်၊ပြည်သူ့အကျိူးသယ်ပိုးမဲ့....ကိုယ်စားလှယ်" ဆိုတဲ့..စိတ်တွေပျောက်သွားတယ်..၊ ..NLD က Search Fire ပစ်လိုက်တာကို လွတ်တယ်ဆိုပြီးရှောင်လိုက်တော့မှ. .ရှောင်နဲ့နေရာမှာထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိသလိုပဲ...၊ တကယ်ဆိုရင်.. ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန်တင်တဲ့အဆိုလို့ပြောဆိုပြီးထောက်ခံလိုက်ကြမယ်..၊ အဲဒီတော့လူမြင်လဲကောင်းတယ်..၊ တစ်ဖက်မှာတော့ကိုယ်စားထားတာတွေ..၀ါးထားတာတွေ.. အကုန်လုံးကိုစာရင်းဖျောက်အင်းဖျောက်လုပ်လိုက်မယ်..၊ (လုပ်လို့လဲမခက်လောက်ဘူး..အခွန်ဌာနစတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူရော... လုပ်ပေးတဲ့သူတွေရောက..ကင်းမှမကင်းကြတာ၊ကိုယ့်လိုလူတွေပဲလေ..၊) ပြီးရင်စစ်တဲ့အချိန်မှာကြေငြာမဲ့အချိန်မှာ..ဘာဟာကွက်မှမရှိတော့ဘူးပေါ့..၊ ရိုဟင်ဂျာဝင်တဲ့ကိစ္စလဲအဲဒီလိုပဲ....၊စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်မှာကိုထောက်ခံမယ်ပေါ့... .ပြီးမှပြန်ညှိနိုင်းပေါ့........၊ အခုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့... .နှစ်ပေါင်း ၄၀ မှာတစ်ခါမှမခံစားရဘူးတဲ့ ခံစားချက်ကြီးကိုခံစားလိုက်ရတော့.... ဆုတ်လဲဆူးစားလဲရူးပုံစံဖြစ်သွားတယ်... ၊ကြံ့ဖွတ်အမတ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားတယ်လို့မြင်တယ်..၊ လူတွေကစောက်ြမင်ကပ်ပြီး.... .နိုင်ငံတကာကလို.. "အယုံအကြည်မရှိအဆို"တင်ဖို့ ဖိအားပေးခံရရင်တော့...... ၂၀၁၅မရောက်ပဲနဲ့ကို....... လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတစ်ကြော့ပြန်လာမှရှုပ်ကုန်မယ်.. .ကြံ့ဖွံ့တွေသတိထားရမယ်... ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရယ် ၊ပါတီသိက္ခာရယ် ၊ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ရယ် တွေကိုချိန်ထိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့.. အခုလုပ်ရပ်ကြီးတွေက... ဆိုးတယ်လို့ပြောတာထက်ကိုဆိုးတယ်..၊ ..ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်တောင်..သရုပ်ဆောင်ဖို့အပင်ပန်းခံလေ့ကျင့်ရတယ်၊ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ Character စရိုက်ပီပြင်မှ၊ သရုပ်ဆောင်တာပီပြင်မှ၊... အပြင်လောကနဲ့တကဲ့ဖြစ်စဉ်ပုံစံအကုန်တူအောင်သဘာဝကျကျဖန်တီးနိုင်မှ.... ပရိတ်သတ်က.."ဟတ်ထိ"တာ၊ ....ကမ္ဘာကျော်တာ......၊ ဘာမှအဆင့်မရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုရင်.. ပရိတ်သတ်က မလေးစားဘူးအထင်မကြီးဘူး...၊ "ငပေါကားကြီး" လို့ပြောကြတယ်...၊ အခု..ကြံ့ဖွတ်အမတ်မင်းတွေနဲ့တမတ်သားတွေက... တကယ်စိတ်ထဲမှာမပါပဲသရုပ်ဆာင်နေတာတောင်...... ပီပြင်တဲ့အဆင့်မရှိဘူး၊ လူမြင်ကောင်းတဲ့အဆင့်မရှိဘူး...၊ " ငပေါကားကြီး" အခု...သူတို့တွေလွှတ်တော်မှာသရုပ်ဆောင်တာကို.. သေချာကြည့်လေ..ကြည့်လေ..၊ တောရွာတွေမှာလိုက်လှည့်ပြီးကတဲ့.. နယ်လှည့်ဇာတ်ပေါက်စလေးကိုကြည့်ရသလိုပဲ... Over Action တွေဖြစ်လိုက်... အသက်မပါလိုက်.. စ်ိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်လိုက်.. စိတ်ရင်းအမှန်တွေပေါ်လာလိုက်နဲ့.... ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ....
စာရေးသူ Unknown အချိန် 8/10/2012
နိုဝင်ဘာ(၁၅)ရက် နေ့လည်ပိုင်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ရှိ လွှတ်တော်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ...
Classic Burma News ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ မှာပါ မိဘနဲ့ မိန်းမကို ပြန်သတ်လို့ ရွာသားတွေက သတ်လိုက်ကြတာ... .....တဲ့ .ဥပဒေကဖြေရှင်...